Mandrahona ny Hanaisotra ny Fahefana Hiasa Ho Fampitam-Baovao Noho ny Famoahana ‘Vaovao Faikany’ ny Governemanta Indiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2018 10:54 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Ελληνικά, Français, English
Pikantsarin'i Mahesh Vikram Hegde toniam-baovaon'i PostCard via YouTube
Namoaka fanambaràna ny governemanta indiana milaza fa mety ahantona ny fahefany miasa ho mpanao gazety raha tratra fa nampiely vaovao “faikany” na “manahirana” ny mpanao gazety iray.
Tonga izao filazana izao herinandro taorian'ny fisamborana an'i Mahesh Vikram Hegde tao amin'ny fanjakana Karnataka state. Hegde no mpanorina ny PostCard News, tranonkala iray fantatra fa namoaka tsaho tsy voamarina izay hita fa mitongilana mankany amin'ny antoko BJP mitondra ao India.
Namoaka filazana ny Minisiteran'ny Vaovao sy ny Fampielezam-Peo aman-Tsary ao amin'ny governemanta indiana, notarihan'ny minisitra Smriti Irani, tamin'ny 2 Avrily fa ny Press Council of India (PCI) [Vaomieran'ny Fanontan-gazetin'i India na Holafitry ny Mpanao gazety] sy ny News Broadcasters Association (NBA) [Fikambanan'ny Mpampiely Vaovao] — ny voalohany misahana saika manontolo ny andrim-panjakana ara-pitsarana amin'izany sehatra izany ary ny faharoa kosa fikambanan'ireo fantsom-baovao ao amin'ny firenena — no tokony hiantsoroka amin'ny famaritana ny tati-baovao ho “faikany”.
Torolalana navoakan'ny Minisiteran'ny Vaovao sy ny Fampielezana Feo aman-tsary. Sary nampiasaina araka ny tokony ho izy.
Ny ampitso, taorian'ny setriny matanjaka avy amin'ireo trano famoaham-baovao maro, nanolo-kevitra ny minisitera Atoa Narendra Modi, praiminisitra Indiana hanafoana ny fanambaràna an-gazety ary hamela ny PCI handamina io toe-draharaha io.
Maro ireo mpiasan'ny fampitam-baovao indiana no manohitra ankitsirano ilay fepetra:
… Mpampiroborobo hatrany ny vaovao faikany eo amin'ny sehatra indostirialy, fanohanana ara-bola ireo tranonkalam-propagandy, tafika mpandoto rindrina sy manana mari-pahaizana amin'ny vaovao faikany ary miezaka hanenja-tsandry amin'ny fahalalahan-gazety.
Na ny vaovaon'ny fepetra na ny fidirana an-tsehatry ny praiminisitra dia samy niteraka sioka maneso ara-politika:
Nampidina ny didy amin'ny vaovao faikany i Smirti Irani rehefa nandray fepetra taorian'ny kiakiaka ny PM Modi. Ny sariitatro amin'ny volavolan-dalànan'ny vaovao faikany.
Rehefa nahatsapa ny fiakaran'ny fahatezerana tamin'ny filazana momba ny vaovao faikany, nibaiko ny hiverin-dalana tamin'ny lalànany manokana ny praiminisitra.
Hitan'ny rehetra ny fahaverezan'ny fifehezana sy ny koropaka misy amin'izao fotoana izao.
Raha mankatoa ny fidirana an-tsehatry ny praiminisitra ny sehatra ifanaovan'ny mpanao gazety dinika tahaka ny Editors Guild of India, dia melohiny mafy kosa ny fepetran-dalàna tamin'ny voalohany ary namoahany fanambarana:
Melohin'ny Editors Guild of India [Fikambanan'ny Tonian'i India] mafy ny fomba befahatany nataon'ny minisiteran'ny Firaisambe misahana ny Vaovao sy ny Fampielezanm-peo Aman-Tsary hanameloka bevava izay mpanao gazety na fifandaminam-pampitam-baovao mamoaka vaovao faikany. Amin'ny filazana fa hanomboka izany fomba izany ny Minisiteran'ny Vaovao sy ny Fampielezam-peo Aman-Tsary, dia nitady haka toerana hametraka lalànan'ny fampitam-baovao ny governemanta. Mety ho nanokatra ny lalana ho an'ireo fitarainana benahoana hanohintohinana ny mpanao gazety sy ny fikambana[m-baovao] hiditra anaty laharana (handeha amin'izay tadiavin[‘ny mpitaraina]) izany…
Niteraka fanontaniana amin'ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fomba fanomezana alalana ao amin'ny PCI (holafitry ny mpanao gazety) sy ny komity foiben'ny fanomezana alalana fantsom-baovao sy mpanao gazety izany, andry federaly. Raha ireo andry ireo no lasa mpanapa-kevitra tokana milaza ny — sy ny tsy — “vaovao faikany” dia mety ho lasa toeram-pitsarana ry zareo.
Lehibe ny mety ho fitongilanan'ny manampahefana ara-politika hanindry na hanery azy ireo hizotra amin'ny lalana iray, nefa tsy misy mangarahara amin'ny fomba fanaovana izany, ho sarotra ho an'ny mpiasan'ny fampitam-baovao na ireo mpiambina ny fahalalahan'ny gazety ny mamaritra hoe miasa ho amin'ny tombontsoam-bahoaka ve ry zareo.
Lasa lohahevitra goavana ao anatin'ny fitondran'ny elatra havanana Bharatiya Janata Party ny sivana sy ny hery malefaka mambomba ny fampitam-baovao be mpanaraka. Manondro izany ao anatin'ny matoandahatsoratry ny vavahadim-baovao antserasera the Wire i Siddharth Varadharajan, Tonia mpanorina azy:
[..] raha tafapetraka [io torolalana] io dia nahatonga ny fikambanam-baovao ho eo ampelatanan'ny mpandoto rindrina, biraokraty, politisiana ary hanamafy ny herin'ny fanivanan-tena efa hitamaso rehefa tantara saropady eo amin'ny lafiny politika no resahina [..]